Kuni, tarreffama faankishinootaa fi himootaa kanneen akaakuu biraa keessatti hin hammatamnee ti.
Haasawaa kompiitaraatiin sagalee xaphachiisa. Sagaleen kunis sirna irratti kan hundaa'uu fi hamtaa sagalee kan siif jijjiiruu hin dandeenye dha.
Yoo barbaachisaa ta'e, Raawwii biraa kaasuu fi haalata foddaa kanaan walqabatu ibsuu dha.
Raawwii sagantaa kan ati dheerina yeroo miiliisekondiidhaan ifteessiteef gufachiisa.
Lakkoofsa sirna dhikkisaa sirna dalagaatiin dhiyaatan deebisa. Hojiiwwan murtaa'oo guutoluuf faankishinii kanatti fayyadamuu ni dandeessa.
Gatii jijjiiramaa qeenyaa akka diraatti deebisa. Jijjiiramtootni qeenyaa akaakuu sirna dalagaa ati qabdu irratti hundaa'u.
Lakkoofsa keessaa kan fooyya'a ammaa LibreOffice deebisa.
Gatii lakkofsaa kan walquunnama itti fayyadamaa saxaatoo ifteessu deebisa.
Lakkofsa tiwiipsii kan dheerina pikseelii bakka bu'an deebisa.
Battalee akaakuu caasaa Uno tiif uuma.
Tajaajila Uno, ProcessServiceManager wajjiniin kaasa.
ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager) deebisa.
Wanta bu'uraa Uno kan to'ataa qaaqa Uno yeroo sa'aa darbee isaa waamamu uuma.
Gatii yeroo dhaggeeffataaf uuma.
Wanta gatiin isaa sirritti beekame kan sirna akaakuu Uno wabeeffatu bakka bu'u deebisa.
UNO object uuma. Foddaaleerrattis, OLE objects uumuu ni danda'a.
Tooftaan kun akaakuu miseensota akka ulaagaatti darban uuma.
Kan inni deebisu tajaajila durtii warshaa yookiin wabii duwwaa ta'e dha.
Amalootni isaa akka dubbifamanii fi qindeeffamaniif qaama ka'aa to'ata. ThisComponent galmee Basic irraa fayyada,kan bakka bu'us galmee kan Basic ofkeessatti qabu dha. Akaakuun wanta ThisComponent dhaan gahamu akaakuu galmee irratti hundaa'a.
Bu'urri lakkadda maddaa fi qaaqawwanii sirna mankitaabaa keessaatti qindeeffamu.
Title is: Ajajawwan Biroo